Maxamed Xasan Cirro: Diwaangelinta ciidamadu waa waddo saxan oo mar hore loo baahnaa – Radio Daljir
Maarso 25, 2019 5:13 g 0
Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaa la aasaasay 12 Abriil 1960, waxa ayna soogaleen dagaallo waaweyn, waxaa se bishii Febaraayo 1991 hadal ku kala diray Raysal Wasaarihii Soomaaliya Cumar Carte Qaalib, kaddib markii jamhado waddanka qabsadeen. RW Cumar Carte waxa uu maalin cad ku dhawaaqay in ciidamada qalabka sida gobol kasta oo ay joogaan ay isu dhiibaan jabhadaha hubaysan.
Amarkaasi wuxuu ahaa jabkii ugu xumaa oo ku dhaca astaantii ugu danbaysay ee dawladnimadii Soomaaliya. Haddaba maxaa ka dhashay? Waxaa ka dhashay in ciidamadii isku duubnaa intii isku gobol ama isku qabiil ahayd intey isa soocdaan, hubkoodana hore u qaataan ay gobolladii iyo qabaa’ilkii ay ka dhasheen aadan, dagaaladii qabiilkana ka qaybgalaan.
Tan iyo wixii markaas ka danbeeyey waddanka ciidan rasmiya oo qalab sida kama jirin. Maamuladdii ugu horeeyey ee Soomaaliya laga aasaasay waxay ahaayeen Soomaaliland iyo Puntland, waxaana ciidanka hadda jira ee ay leeyihiin lagu dhisay nidaam maleeshiyaad qabaa’ilka laga soo ururiyey, hubkooda ay la imanayaan, xeryo lagu xareeyo, kaddibna tuute iyo mushahar la siiyo, ilaa wakhtigaan ciidamada labadaas maamul waxay u dhisan yihiin qaabkii maleeshiyaadkii lagu unkay, iyadoo tababaro dheeraad ah la siiyo.
Markii dawladda Federaalka ahayd ee Madaxweynaha uu ka ahaa Alle ha u naxariistee Cabdilaahi Yuusuf Axmed ay Muqdisho soo cagadhigtay wuxuu raacay hannaan lamid ah kii Puntland iyo Soomaaliland, wuxuuna xeryo ku ururiyey maleeshiyaadkii qabaa’ilka, iyadoo qofkastoo horkacayey looga dhigay taliye, sidaas ayaana ciidamadda hadda jira ee DFS ay ku abuurmeen, ilaa wakhtigaasna ma jirin hannaan rasmiya oo tiro sax ah leh oo lagula socon karo.
Tirakoob la’aantaasi waxay keentay in saraakiil heer dhexe ahi ay si joogta ah tirooyin aan jirin mushahar ahaan ugu qaataan, waana halka sartu ka quruntay, kaddib markii dawladdaani soojeedisay in tirakoob sax ah lagu sameeyo ciidamada, iyadoo marar horena la soojeediyey tirakoobka, waxaana bilaabay taliyihii hore ee ciidamada Janaraal Gorod.
Intii tirakoobka la sameeyey waxaa soo baxay fadeexado badan, tirada u diiwaangashanayd dawladda waxay ahayd 27 kun oo askari, waxaa soo baxay wax ka yar intaas, in kastoo weli tirakoobkii socdo, waxaa kale oo soo baxay dad shaqooyin kale haya oo u diwaangashan ciidan ahaan, mushaharna ku qaata.
Anniga nin aan saaxiib nahay oo Talyaaniga ku nool shan sano ka horna ka tegey Muqdisho ayaa ii sheegay xalay in uu u diiwaangashanaa askari ahaan oo shantaas sano mushaharkiisii u soo dhacayey, hadda se diwaangelintaani ka hakisay, waana arrinta igu dhalisay inaan maqaal ka qoro sheekadaan.
Dawladnimada Soomaaliya waa mid ka burbursan dhinac kasta. Mar kastoo tallaabo wax lagu saxayo la damco in la qaado waxay u baahan tahay taxadar dheeraad ah, si dawladnimada curdinka ah ee hadda aan haysanna aan u ilaashanno.
Diwaangelinta markii la bilaabay waxaa wakhtigaasba ka biyodiiday saraakiil wakhti badan helayey lacago ciidan ku qoran diiwaan aan jirin, waxayna caqabad ku noqdeen in si sax ah diwaangelinta ciidanka loo sameeyo wakhti ku haboon.
Mar aan la sheekaystay qof kamid ah dadka nidaamka diwaangelinta wada magaciisana ka gaabsaday sababo ammaan wuxuu ii sheegay in wakhtiyo badan markii la damco in ciidamada la diwaangeliyo ay caqabado hordhigaan ama ay ciidamada hawlgallo u diraan ama cudurdaarro kale loo sheego, si markasta loo daboolo ogaanshaha tirada rasmiga ah ee ciidanka joogta goobtaas. Taasina waa tan dib-u-dhaca ku riday tirakoobkii, oo aysan helin mushahar kuwii aan la diwaangelin, waana tan keentay in la arko ciidan shaashadaha soo istaagaya oo leh mushahar nalama siin.
Waxaa kaloo jira askar iyana la diwaangeliyey oo aan mushahar helin, kuwaasi ma badna, sarkaal diwaangelinta ayaan iigu sheegay arrintu in ay ku dhacday lambarada mushaaraadka askarta loogu diro oo marka combuuterka la gelinayo lambar kamid ahi khaldamo, ayse saxayaan taas.
Ilaha kale ee xiisadaha ka dhashay diwaangelinta kana faa’iidaysanaya waa mucaaradka dawladda oo iyagu u arka wax kasta oo tallaabo ay dawladdu qaado fursad ay dhaliilo ugu samayn karaan, mana jirto hab rasmiya oo ay soojeediyaan oo talo ah oo wax hagaajinaya, waxa ayna u muuqdaan in ay jecelyihiin in waxa la haysto lagu kala yaaco. Taas waa mid ummadda Soomaaliyeed anfariir ku noqotoy iyo sida mucaradku wax kasta oo dan qaran ah ay isaga indhotiraan iyagoo keliya fiirinaya xurgufta siyaasadeed ee markaas oo kaliya.
Talo ahaan dawladda waxaa u furan waddooyin dhowr ah, sida in ay mushaharaadka ku bixiso tirooyinkii hore inta diwaangelintu socoto, si looga gaashaanto culays fuula askariga iyo amaankaba. Waxa ay se dowladdu ku saxsantahay in aysan ka noqon habka diwaangelinta oo culaysyo badan iyo gooddin uga timid dhinacyo kala duwan.
Jirtaayo intaas waa muhiim in ay dawladdu qorshe u samayso qaabka ciidanka dawladdu u dhisanyahay oo ay wax badan ka bedesho, ciidamadana la isku dhafo si ay meesha uga baxdo qaababkii qabiilku uu lug weyn ku dhexlahaa Ciidamada Qalabka Sida ee Qaranka.
Qore: Maxamed Xasan Maxamed (Cirro) | Email: [email protected]
Siyaasadda & Dhaqaalaha 465 Wararka 18238